Fivoriamben’ny CPCCAF:TOMBONY HO AN’NY SEHATRA TSY MIANKINA -
AccueilRaharaham-pirenenaFivoriamben’ny CPCCAF:TOMBONY HO AN’NY SEHATRA TSY MIANKINA
13/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nanomboka omaly hatramin’ny anio, eny amin’ny Centre de Conférence Internatonale Ivato (CCI), ny fivoriambe faha-42-n’ny Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones na ny CPCCAF. Fivoriambe iraisan’ireo Antenimieran’ny varotra sy ny indostria avy amin’ireo firenena Afrikanina sy ireo amin’iny tapany Avaratr’i Eorôpa iny ka mampiasa ny teny frantsay ny CPCCAF. Araka izany, nosokafana tamin’ny fomba ôfisialy omaly, ity fivoriambe faha-42-n’ny CPCCAF ity.
Voalaza fa fanindroany amin’izao i Madagasikara no nampiantrano ny fivoriambe iraisan’ireo antenimieran’ny varotra sy ny indostria amin’ireo firenena mampiasa ny teny frantsay afrikanina sy avy amin’ny tapany Avaratr’i Eoraopa.
Araka izany, nambaran’ny filohan’ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria (CCI) eto Antananarivo, Soanorondriaka Andriamamonjiarison, tamin’ny fanokafana ny hetsika fa hahazo tombony lehibe amin’ity fivoriambe ity ireo sehatra tsy miankina. Hisy mantsy, araka izany ny fifanakalozana eo amin’ireo samy Antenimieran’ny varotra amin’ireo firenena mpikambana aty Afrika sy amin’ireo firenena frankôfôna.
Noho izany, nahazo fanasana amin’ity hetsika ity avokoa ireo Antenimieran’ny varotra sy ny indostria miisa 24 eto Madagasikara izay mivondrona ao amin’ny federasion’ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria (FCCIM). Anton’izay, raha ny fanazavana hatrany, somary marefo ireo CCI any amin’ny faritra ka mila mifanakalo sy mampiseho ny vokatra eo aminy izy ireo.
Ankoatra izay, voalaza fa anisan’ny manana toerana lehibe amin’ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena ny sehatra tsy miankina. Indrindra ihany koa ny fametrahana vovonana ho an’ireo vehivavy mpandraharaha mba hahafahan’izy ireo mivelatra sy mampivelatra ny zavatra ataony eo amin’ny sehatry ny fandraharahana ara-barotra, sns.
Etsy andaniny, anisan’ny zavatra hodinihin’ireo mpizaika mandritra ity fivoriambe faha-42-n’ny CPCCAF ity ny fampivelarana ny tsena ary ho fanatsarana ny kalitaon’ireo vokatra vokarina, sns.
Na dia mbola amin’ny volana desambra ho avy io aza ny fe-potoana nomen’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria, ny jeneraly Randriamahavalisoa Girard, ireo vondron-tobim-paritry ny zandary manerana ny nosy hampisehoana fa tena mahefa ny asany tokoa ...Tohiny